'Lixesha leXesha eli ... kwiBenchmark ngokuchasene neNdlela yokuHamba kweXesha | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 22, 2017 NgoLwesihlanu, ngoDisemba 22, 2017 Douglas Karr
Kwiindawo ezinjengezam, ixesha leeholide linokubonakala lidandathekile njengoko ndijonga kwakhona i-analytics. Ukugcwala kwabantu ngokubanzi kuhla kunye nokugcwala kwabantu njengoko abaphulaphuli bam betshintshela kwimowudi yeholide kwaye baqala ukucima imizamo de kube semva koNyaka oMtsha. Kwakhona lixesha apho kufuneka ndiqinisekise bobabini kunye nabaxhasi bam ukuba siqhuba kakuhle nangona kukho izinto ezimbi esizibonayo ngenyanga-ngaphezulu kwenyanga okanye ukuhla kwexesha.
Isitshixo sokuziqinisekisa kukusebenzisa iintsingiselo Google njengomgangatho wokuhlalutya ukugcwala kwakho. Abahlobo bam abalungileyo ngabam Ukulawulwa kwezinambuzane zaseIndianapolis inkampani. Xa ukuwa kuguqukela ebusika, umsebenzi wezinambuzane uhla kakhulu. Ngaphakathi kuGoogle Analytics, sibona malunga neepesenti ezingama-40 zendlela esayibonayo ukusukela kwincopho yehlobo. Ukujonga izibalo kuhamba phantsi njengale nyanga-ngaphezulu kwenyanga kunokuphazamisa, kodwa kuyinto yendalo.
Nanku ukujonga imeko iyonke yokukhangela kulawulo lwezinambuzane eMelika. Inzala itshathiwe njengesalathiso somdla, ke uyabona ukuba inzala ephezulu isehlotyeni kwaye ngoku ingama-47.
Awukagqibi okwangoku. Kuya kufuneka ukhumbule ukuba kukho imimandla yendawo ngaphakathi elizweni enamaxesha amade kunye namaxesha amafutshane, okanye kungabikho kwenyanga kubanda kwaphela, ke ukuba uyishishini lendawo uya kufuna ukutshintshela uhlalutyo kwindawo yedolophu. . Sikhethe ingingqi ye-Indianapolis, kwaye uyabona ukuba isalathiso singama-25.
Ngenxa yale meko yamaxesha onyaka, sinokulinganisa ukugcwala kwesiza ngokuchasene nayo. Ukuba inzala ikwi-25% yenzala ephezulu ukusuka ehlotyeni, sinokuthelekisa indawo yethu yokugcwala kunye nokugcwala kwabantu ngokuchasene noko. Lo mthengi uphantsi malunga neepesenti ezingama-35- hayi iipesenti ezingama-75 ukusukela ehlotyeni, ngenxa yoko sikhululekile kuba besenza ngaphezulu komndilili. Ukugcwala kwethu kwezinto eziphilayo kunyukile unyaka-ngaphezulu-kodwa ngama-27%. Andinathemba kakhulu, nangona kunjalo. Sibe nexesha elimnene eMidwest xa kuthelekiswa neminye iminyaka kungoko ke kufuneka silindele ukuba ibango linyuke ngaphezulu konyaka.
Ukhe wajonga kwimidla yexesha elithile kwishishini lakho kwaye ulungelelaniswe ngokuchasene nabo?
tags: Uhlalutyogoogleiindlela zonyakamaxesha